トップページ ＞ 言語 ＞ コーサ語 ＞ Intsingiselo yemeko HIV kunye nendawo ngasemva ukubhula "umntu ejingayo", iqabane iimvakalelo?
Ikhadi le "ndoda ejingayo" ethetha
umsebenzi ka-3500 yen 'ithamsanqa-mathamsanqa kunye lwentsebenzo simahla ukufumana indlela
"I wamxhoma Man' kwindawo umva, umoya self-uthando eya kwenza ukuba elinye iqela ngaphezu koko yabo , ukuzinikela, kuyinto isiqephu, nto leyo ethetha yokuzincama. Kunjalo, kuba ibonisa ukuba amanzi leqela eluthandweni, kodwa kunokuba kwakhona ezinxulumene bokuzincama kuwo, imigudu enjalo kunye neemvakalelo abazinikeleyo uvuzwa ngenye imini, ekugqibeleni ulonwabo yam enkulu ukuba atyelele I ikhadi.
isikhundla ezintle "Le umntu oxhonywa" indawo entle iyavakala kwabo iimvakalelo "umntu ethe yarhoxiswa"
of kumntu bengachani, iinzame njengangoku wenziwa, uvuzwa kwixesha elizayo oko kuthetha ukuba tyelelo enkulu happy. Xa uthando, okanye ukwenza yena, angathanda na ukuba iluncedo ziyinyaniso.
Lithetha ukuthini eli khadi, egwetyelwe yena kunalowa zabo ukuba iimvakalelo uvuzwa eziya kwenza ukuba elinye iqela, amanye amanyathelo eya kwenza ukuba elinye iqela, iqulathe kusoloko ndonwabe yaye anelisekile kunye neemvakalelo ayinayo.
Xa kwafika eli khadi ngaphandle, kuba kusenokwenzeka ukuba ufuna inguqu, ungafuna ukuxhasa abo kufutshane kangangoko kunokwenzeka. Yena thina waphawula loo ebusweni bakho.
Ngokomzekelo, akazange babengaqhelananga imvakalelo lokufumana uthando olutsha nje nahlukana sokuqala Kano, okanye baqhele nemvakalelo yokuba ekugqibeleni ukuthatha waya uthando olutsha, okanye ekugqibeleni kubonakala ukuba ibali umtshato yaye sele nithandana ngonaphakade, abahlobo ngalinye enye yaba ndibe ithuba siqhelane kuye nomthandi kujikela eli khadi, kuba ngumqondiso ukuba uzive elungileyo, ingumbono omhle ukusondela makabulawe sizana isiphelo.
"Le umntu oxhonywa" nezinye iimvakalelo ukuba uguqule indawo ithathwa ukuba ibhekisele
_x000 isikhundla reverse D_ "I wamxhoma Man", kunjalo kude imigudu Toka kunye nokuzinikela iya kuphela kumgudu engento, kwaye okwangoku nokuba sele wenze i kulindeleke, ihamba isiphelo kwenye indlela eyahlukileyo ngokupheleleyo libonisa ukuba. Ekubeni
iimvakalelo zakhe yesoka okanye uthando ezingabuyekezekiyo kukho kungenzeka ukuba ukuya kwenye kukuba yena, wenza mhlawumbi akanamdla uthando ngoku nje mhlawumbi. Xa ngaba ufuna ukwaphula ulwalamano ngoku, kuba ikhuseleke kubhetele ukuba kakhulu uthando isibheno, ukuba wayeza kuba ngabahlobo elungileyo izenzo ngexesha besagcine umgama kancinane.
ukuba kwindawo kufutshane ngamaxesha onke, ngumbono omhle ukuba alinde bayahlelwa lokuhamba iya kutshintsha.
Xa indawo umva uphuma "I baxhonywa Man", kwakunye umgudu okanye nokuzinikela kwamanye iqela, kubalulekile ukuba bayihlole ezolile imeko nenjongo yabo. Xa ndicinga elidlulileyo, inxalenye ukuba babe ngumfanekiso uyakwazi ukubonakalisa, oko kukhokelela sizakhele bayahlelwa elizayo.